वर्णन मिडिया विश्वका १००० टप कम्पनीमा नेपाल सून्यः कसरी बढ्छ निर्यात ? - वर्णन मिडिया
विश्वका १००० टप कम्पनीमा नेपाल सून्यः कसरी बढ्छ निर्यात ?
२८-साउन-२०७६ | ०३:५६:३२ pm
विश्वमा ग्राहकहरुलाई सन्तुष्टपारेर अर्बौको व्यापार गर्न सक्ने कम्पनीहरुलाई फरच्युन पत्रिकाले विश्वका समृद्ध कम्पनीको छनोट गरेर त्यसको सुची जारी गरेको हुन्छ । त्यो सुची तयार पार्दा कर्मचारीहरुको सन्तुष्टी , निर्देशक , वित्त बिस्लेषकहरुको अनुमानको आधारमा टप कम्पनीहरुको छनौट गरिन्छ । यस बर्षका टप कम्पनीहरु निम्न बमोजिम छन् । सवैतिरबाट पाएको प्रसंसा ग्राहकबाट सन्तुष्टि आदिको आधारमा छानिएका कम्पनीहरु निम्न बमोजिम छन् ।
४ वाल्ट डिज्नी
५ स्टार वक्स
८ नेट फ्लेक्स
९ जेपि मर्गन चेस
१० फेड एक्स
गतबर्ष जस्तै एप्पल यसबर्ष पनि धेरै प्रशंसाा पाउने कम्पनी हो । लगातार १२ बर्ष टपमा रहेको एप्पलले यसबर्ष पनि राम्रो कम्पनीमा गनिएको छ । विश्वका सवैभन्दा धनीमानिस जेफबेजोसको एमाजोन दोश्रोमा परेको छ । वारेनवफेटको कम्पनी वर्कशायर हाथवे संसारमा प्रशंसा पाउनेमा तेश्रो स्थानमा रहेको छ ।
पत्रिकाले समृद्ध कम्पनी छनौट गर्दा विश्व भरका टप १००० कम्पनी त्यस अन्तर्गत बनेको ग्लोबल इण्डेक्स ५०० लगायतका कम्पनीको वीचबाट यि १० कम्पनी छानिएका हुन् । यि १० वटा कम्पनीको छनोट गर्दा १५ हजार कम्पनी विश्लेषकहरुसंग सर्वेक्षण र छलफल गरेर यो सुची तयार पारेको हो ।
यो सुची तयार पार्दा निम्न कुराहरुलाई ध्यानमा राखिएको हुन्छ ।
जस्तै इनोभेसन अर्थात नवपर्वतनको क्षमता, व्यक्ति व्यवस्थापन, कर्पोरेट सम्पत्तिको उपयोग, समाजिक उत्तरदायित्व, गुणस्तर व्यवस्थापन, वित्तिय अवस्था, दिर्घकालिन लगानीको अवस्था, उत्पादन र सेवाको गुणस्तर, विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा जस्ता ९ वटा विषयलाई इन्डेक्समा राखेर प्रत्येक आधारमा अंक दिएर । त्यसमा जसको अंक बढी हुन्छ उसलाई टपमा राखिन्छ ।
माथिका कम्पनीहरुको सुचीकरण यिनै ९ वटा आधारबाट छनौट गरिएको हो ।
टप १० मा मात्र होइन ग्लोबल इष्डेकस तथा टपा १००० मा नेपालको एउटा पनि कम्पनी नछानीनु विडम्वना हो ।